Ugu dambeyntii dib uga noqoshada koorsada Manifold - Geofumadas
Ugu danbeyntii dib uga noqo koorsada Manifold
Oktoobar, 2008 Baridda CAD / GIS, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Toddobaadkan ayaa adag, ka dib markii farsamo heer sare ah oo la mashruuca jiray muddo ka badan hal sano ah aan ka fariisan, Waxaan u lahaa in la sameeyo siminaaro in uu samatabbixi lahaa kala cayncayn ah loo isticmaalo ee degmada. Isla mar ahaantaana waa inaan diyaariyaa laba macalimiin beddela.
Kulanka ugu horreeya waxaa dib loo eegay Microstation seddex isbuuc ka hor, inkastoo ay sidoo kale ka mid tahay muujinta qaar u dhigma oo leh AutoCAD; Isbeddelkan toddobaadkan wuxuu ahaa diyaarinta xogta aasaasiga ah ee Microtation Geographics in lagu soo dhoofiyo Manifold Systems.
10 ardayda, macallin 1, macalinka musharraxa 2, maalmaha tababarka 4. Tan iyo markii gaari Slaam hotel ahaa Project oo ii malhumoré sababtoo ah qaar ka mid ah ma gudan karo hawlaha seminar hore dhowr maalmood ka tagay habeenkii 8 ... sidaas darteed waxa uu ahaa mid waxtar leh.
Saacadaha 6, farsamo yaqaan, 1.12 mts pixel for a rustic area. Waxaan isticmaalnay Khariidadaha Diiwaangelinta si aad uga soo daabacdo Google Earth dhammaan sawirada xallinta sare ee dawladaha hoose ee 10 ...
Saacadaha 3, farsamo yaqaan, 34 Xakamaynta Xakamaynta. Hormarinta ee sawirka la soo dejiyey oo leh Microstation Descartes, ka dibna waxaannu ku biirinnay kana jarnay qaybaha danta ee degmada ...
Saacadaha 2, Rukhsadaha 10 ee hawlgaliyay, Farsamada 3. Waxaan u baahannahay inaan qaadno cpu'sa Cybercafé si aad ugu xirto internetka iyo dhaqaajiso liisanka ee Manifold GIS ...
aagga waxay leedahay nidaam lousy qaybinta awoodda ugu yaraan jeer 4 maalin korontadu dantay inkastoo meesha lahaa warshad mashiinada oo dhan ma leeyihiin batari ... MicroStation faa'iido leedahay autosave laakiin Manifolds badan wax laga badiyay 40 daqiiqado shaqo ah oo aan marar badan kaydin.
Maxaa soo socda:
Dabcan waxaa loo loogu talagalay in lagu dhiso xogta, natiijada siminaarka ayaa abuuraya maps of waddooyinka iyo biyaha raaca lahaa in la sameeyo iyadoo la isticmaalayo 1 ah sheet map: 50,000 magacyada meel iyo sanamkii la soo bixi inaan ka dhaansado labada jidadka, Wabiyaal iyo jabay Waxaan ku dhisayey Microstation Geographics, ka dibna waxaan nadiifin jirey iyo xidhiidhka noodhka; Ugu dambeyntii dhoofinta "fence qoryaha"by heerar kala duwan iyo isbedelka v8 si v7 iyada oo loo marayo dib u-soo-saarka batch ... khibrad diimeed oo dhan sida Enrique Iglesias odhan lahaa.
Koorsada xiga waa saddex wiig, markaan rajeyneyno inaan dhisi karno darajada dusha sare, cadawga iyo carrada. Sidoo kale codsiga falanqaynta iyo maareynta xogta Manifold.
Ugu dambeyntii, koorsada ugu dambaysa waxaa ka mid noqon doona maamulka, mawduucyada iyo muuqaalka sawirada kuwaas oo koorsada ay tahay inay ku jirto daabacaadda adeegyada IMS, abuuritaanka qaababka wax soo saarka iyo wareejinta xogta GvSIG, Khariidada AutoCAD iyo Bentley Map.
Bentley Systems Google Earth GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous U diyaargarowga seminar GvSIG
Post Next Ka soo qaad khariidada shp si Microstation ahNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Ugu dambeyntii dib uga soo laabashada kooraska Manifold"
Abriil, 2012 at
Manifold Manifold Waxaan wali xasuusinayaa tababarka aan helay ... waxa ugu xun waxay tahay inaan mar dambe iigu yeedhin ...